ဗားရွင္း 0.14.0 လြန္ခဲ့ေသာ 20 မိနစ္က
မိုဘိုင်းအတွက်သီးသန့်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးက PLAYERUNKNOWN'S စစ်။ အခမဲ့အချိန်မရွေး, နေရာမရွေး Play ။ PUBG MOBILE မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အများဆုံးပြင်းထန်သောအခမဲ့-to-play multiplayer action ကိုကယ်တင်တတ်၏။ အတွက် drop တက်ဂီယာနှင့်ယှဉ်ပြိုင်။ မော်ကွန်း 100-player ကိုတိုက်ပွဲနှင့်အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီ 4v4 အဖွဲ့ deathmatch နှင့်ဖုတ်ကောင် Modes သာရှင်သန်ရပ်တည်။ ရှင်သန်မှုသော့နှင့်အနိုင်ပေးရပ်နေသည်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တစေသတည်း
အကောင်းဆုံးဂိမ်း, ပန်ကာအကြိုက်ဆုံးဂိမ်းအများစုအပြိုင်အဆိုင်ဂိမ်း - Google ရဲ့ 2018 ဆုပေးပွဲ Play
သွားလာရင်းအပေါ် Unreal Engine ကို4Play စ console ကိုအရည်အသွေးကိုဂိမ်းကစားခြင်းအားဖြင့် Powered - မိုဘိုင်းပေါ်တွင်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ မေးရိုး-ကျဆင်းနေ HD ကိုဂရပ်ဖစ်နှင့် 3D သံကိုကယ်တင်တတ်၏။ စိတ်ကြိုက်မိုဘိုင်းထိန်းချုပ်မှု, သင်တန်းပေးခြင်းသည် Modes နှင့်စကားသံကိုချက်တင် featuring ။ , မိုဘိုင်းအပေါ်လက်နက်အပြုအမူအရှိဆုံးချောမွေ့ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်လက်တွေ့ ballistics ခံစားရသည်။
ဧရာ Battle Maps - Erangel မှစ. Miramar, Vikendi မှ Sanhok ရန်, အရွယ်အစား, မြေပြင်အနေအထား, နေ့ / ညဥ့်သံသရာနှင့်ပြောင်းလဲနေသောရာသီဥတုကွဲပြားသောဤကြီးမားပြီးအသေးစိတ်ပွိုအပေါ်ယှဉ်ပြိုင် - မြို့ပြမြို့နေရာများကနေအေးစက်နေတဲ့ tundra ရန်, တောထဲတွင် dense ရန်, တစ်ဦးချင်းစီစစ်ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်များကိုကျွမ်းကျင် အနိုင်ရသင့်ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာမြောက်ချဉ်းကပ်ဖန်တီးရန်။
နက်ရှိုင်းမှုနှင့်မျိုးစုံ - 100-player ကိုဂန္ mode ကိုကနေလျှပ်စစ်-အစာရှောင်ခြင်း Arcade သည် Modes နှင့်ပြင်းထန်သောနှင့်ပါး 4v4 အဖွဲ့ Deathmatch နှင့်ဖုတ်ကောင်သည် Modes မှ Featuring ။ လူတိုင်းအတွက်တစ်ခုခုရှိပါသည်။ တစ်ကိုယ်တော်, Duo နဲ့ 4-player ကိုကစားသမားအတွက် Play ။ သင်၏နှလုံးရဲ့ content တွေကိုရန်သင့်လက်နက်ပစ်ခတ်! တစ်ဦးတည်းသောဝံပုလွေစစ်သား Be တစ်ခုသို့မဟုတ် Clan ရဲ့နှင့်အတူဆော့ကစားခြင်းနှင့်အကူအညီလိုအပျသညျ့အခါတာဝန်များ၏ခေါ်ဆိုမှုကိုဖြေကြား! FPS (ပထမ-person shooters) နှင့် TPS (Third-person shooters) ကမ်းလှမ်း, ဂိမ်းနှင့်လက်တွေ့ကျကျလက်နက်တစ်ခုအာဆင်နယ်အသင်းအတွက်အပေါငျးတို့သကွဲပြားခြားနားသောအနေအထားများအဘို့ယာဉ်များအများကြီးကစား။ နောက်ဆုံးစက်ဝိုင်းဆီသို့ဦးတည်ခရုဇ်ရန်သင့်ပြီးပြည့်စုံသောစီးနင်းခြင်းနှင့်အပိုငျးပိုငျးကိုရှာပါ!
အမွဲကြီးထွားလာ - အစဉ်အမြဲကြီးထွားလာခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ PUBG MOBILE စောင့်ရှောက်သောသစ်ကိုဂိမ်း features နဲ့ Modes သာပို့ဆောင် Daily သတင်းစာဖြစ်ရပ်များ & စိန်ခေါ်မှုများနှင့်လစဉ်မွမ်းမံမှုများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏အစွမ်းထက်နှင့်လေးနက်သော Anti-cheat ယန္တရားများလူတိုင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုတို့ကကစားတဲ့တရားမျှတပြီးမျှတတဲ့ဂိမ်းပတ်ဝန်းကျင်အာမခံပါသည်။
အန်းဒရွိုက် 5.1.1 သို့မဟုတ်အထက်နှင့်အနည်းဆုံး2GB ကိုမှတ်ဉာဏ်: * PUBG MOBILE သည့်စနစ်လိုအပ်ချက်များကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ အခြား devices များအတွက် PUBG MOBILE Lite ထွက်ကြိုးစားနိုင်
တရားဝင် site ကို: http://www.pubgmobile.com
Facebook မှာ: http://www.facebook.com/PUBGMOBILE
PUBG MOBILE အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PUBG MOBILE အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
dllikeufeel စတိုး 711 184.06k